फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा असोज २७ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आफ्नो नवौं वार्षिक साधारणसभा आगामी असोज २७ गते आह्वान गरेको छ । कम्पनीले काठमाण्डौको अनुपम फूडल्याण्डमा आफ्नो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभाले यसअघि संचालक समितिले गरेको १२.६३१६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पास गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको...
महालक्ष्मी विकास बैंकले दशैंअघि नै बोनस खुवाउने
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमीटेडले आगामी असोज २६ गते आफ्नो १७ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । यसको अर्थ कम्पनीबाट प्रस्ताव गरिएको लाभांश सेयरधनीले दशैंअघि नै पाउनेछन् । कम्पनीले काठमाण्डौको मीनभवनस्थित अल इन वान ब्यांक्वेटमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभामा ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ प्रतिशत नगद लाभांश...
गरिमा बैंकले दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने, बुक क्लोजको मिति तय
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंकले दशैंअघि नै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी असोज २६ गते आफ्नो १२ औं वार्षिक साधारणसभा पोखराको होटल पोखरा ग्राण्डमा आह्वान गरेको हो । साधारणसभा संचालक समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार १० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको अजेण्डा प्रस्तुत हुनेछ । यस्तै, यो बैंकले...
जानकी फाइनान्सको साधारणसभा असोज २९ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमीटेडले आगामी असोज २९ गते आफ्नो २२ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । साधारणसभा जनकपुरधामस्थित होटल रामामा आयोजना हुनेछ । साधारणसभाले २२ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, संभावित मर्जर र एक्वीजिसनको बाटो खुल्लै राख्ने अजेण्डामाथि छलफल...
स्वरोजगार लघुवित्तको २०% बोनस सेयर सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा ८२६ रुपैयाँ प्रतिकित्ता अन्तिम बिक्री मूल्य रहेको स्वरोजगार लघुवित्त बित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत बोनस सेयर पाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईले आजै यो कम्पनीको सेयर खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अर्थात असोज ४ गते यो कम्पनीको बोनस सेयर पाउनका लागि सेयर खरीद गर्ने अन्तिम दिन हो । कम्पनीले आगामी असोज २० गते...
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कामना सेवाको साधारणसभा आह्वान
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकले आगामी असार ३२ गते आफ्नो ११ औं वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको इन्द्रेणी फूडल्याण्डमा आह्वान गरेको हो । साधारणसभामा बैंकले ५.५० प्रतिशतले हुन आउने १३ करोड ४ लाख बराबरको बोनस सेयर र ६.५० प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश वितरणको...
असार २९ गते मेगाको एजीएम, यस्ता छन् विशेष प्रस्ताव
काठमाण्डौ । मेगा बैंक लिमीटेडले आगामी असार २९ गते आफ्नो ७ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकले काठमाण्डौको प्रदर्शनीमार्ग स्थित राष्टियसभा गृहमा असार २९ गते शुक्रबार वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । बैंकको जेठ २९ गते बसेको संचालक समितिको २२१ औं बैठकले साधारणसभाको मिति तय गरेको बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ...
आठ महिनापछि देवः विकास बैंकको अर्को बुक क्लोज मिति, साधारणसभा कहिले ?
काठमाण्डौ । लामो समय सेयरधनीलाई अलमलमा पारेर सर्वत्र आलोचना व्यहोरेको देवः विकास बैंक लिमीटेडले आगामी असार २७ गते आफ्नो ११ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकले असार २७ गते बुधबार काठमाण्डौको खुसीबुंस्थित नेपा बैंक्वेटमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । देवः विकास बैंकको असार ५ गते सम्पन्न २३९ औं बोर्ड बैठकले साधारणसभाको मिति...
सेयर संरचना मिलाउन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको यस्तो जुक्ति
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले कम्पनीको सेयर संरचनाको अनुपात मिलाउने नयाँ जुक्ति निकाल्दै २३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीको सोमबार काठमाण्डौमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफाबाट १० प्रतिशतको दरले बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि आवश्यक ६ लाख ३९ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको...
चैत २८ गते नेपाल लाइफको साधारणसभा, १० % संस्थापक सेयर साधारणमा रुपान्तरण हुने
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले उसको १० प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने भएको छ । देशकै टप जीवन बिमा कम्पनीको रुपमा स्थापित नेपाल लाइफले चैत २८ गते १८ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्दै त्यहाँ कम्पनीको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गरी १० प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित...
नेपाल लाइफले बोलायो साधारणसभा, १० प्रतिशत संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गरिने
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले उसको १० प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने भएको छ । देशकै टप जीवन बिमा कम्पनीको रुपमा स्थापित नेपाल लाइफले आगामी चैत २८ गते १८ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्दै त्यहाँ कम्पनीको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गरी १० प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने विशेष प्रस्ताव...
बोनस दिएपछि सेञ्चुरीको चुक्तापूँजी ८ अर्ब नाघ्यो
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले बोनस सेयर जारी गरी चुक्तापूँजी ८ अर्ब ६ करोडको उचाईमा पुर्याएको छ । देशकै कान्छो वाणिज्य बैंकले राष्टबैंकले तोकिएको समयभित्रै चुक्तापूँजी ८ अर्ब माथि पुर्याएको हो। बैंकको बुधबार काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न साधारणसभाले ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित...